EPSON STYLUS ဓာတ်ပုံ P50 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Search နဲ့ကားမောင်းသူ installation ကိုဓာတ်ပုံပရင်တာ Epson Stylus ဓာတ်ပုံ P50
သူကအသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ် operating system-install ခဲ့သည်ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်လျှင်ဓာတ်ပုံပရင်တာ Epson Stylus ဓာတ်ပုံ P50 ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုများအတွက်အများအပြားရွေးချယ်စရာပေးထားသည်။
Stylus ဓာတ်ပုံ P50 ဖို့ software ကို Install
စည်းကမ်းအတိုင်း, ပုံနှိပ်ယန္တရားအဆိုပါယာဉ်မောင်းကို CD ဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်စွက်။ သို့သော်အားလုံးသုံးစွဲသူများကအချိန်နှင့်အတူသိမ်းဆည်းဘဲ, ယနေ့ရဲ့ PC များနှင့် laptop ထဲမှာအားလုံးမှာ drive ကိုမဖွစျနိုငျသညျ။ ဤအခြေအနေ၌, တူညီတဲ့ကားမောင်းသူကိုအင်တာနက်ကနေ download လုပ်ပါရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Method ကို 1: ဆိုက်ကို Epson
သင်တန်း၏, တိုင်းထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်သမျှပံ့ပိုးကူညီမှုပေးစွမ်းသည်။ အားလုံးကိရိယာများ၏ပိုင်ရှင်များ Epson က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဤကိစ္စတွင်အတွက်ဆိုက်ကနေ software ကို download လုပ်ပါကတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သငျသညျ Windows 10 ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, ယာဉ်မောင်းက optimized သည်မဟုတ်, သင်မူကားကို Windows 8 (လိုအပ်ပါက, compatibility mode မှာ) အတွက် software ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစား, သို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသည်အခြားရွေးချယ်စရာမှအပေါ်ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က link ကိုနှိပ်ပါ, သွားပါ "ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပံ့ပိုးမှု".
ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်တွင်, ရိုက်ထည့်ပါ P50 နှင့်ထိခိုက်စာရင်းထဲက, ပထမဦးဆုံးရလဒ်ကိုရွေးပါ။
သငျသညျဓာတ်ပုံပရင်တာ Archive မော်ဒယ်များကိုရည်ညွှန်းကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်ပေမယ့်ယာဉ်မောင်းသို့ရာတွင်အောက်ပါဗားရှင်းများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ် windose: XP, Vista, 7, 8 လိုချင်သော Select လုပ်ပါ, သည်၎င်း၏နည်းနည်းအပါအဝငျ။
ဒါဟာရရှိနိုင်ကားမောင်းသူဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ က Download လုပ်ပြီးအထုပ်။
ကိုကလစ်နှိပ်ပါသော executable file ကို run « Setup ကို»။ ဒီအထုပျအပိုးဖွေယာယီဖိုင်တွေဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်။
တစ်ဦးက window ကိုလက်ရှိယာဉ်မောင်းနှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်အသီးအသီးသောအဓါတ်ပုံကိုပုံနှိပ်စက်များကိုသုံးမော်ဒယ်များ၏စာရင်းတစ်ခုနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောမော်ဒယ်သာနှိပ်ဖို့ရှိသည်, မရွေးနေသည် "အိုကေ"။ သငျသညျကအားလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဖြင့်ချင်ကြဘူးလျှင်သောက default ပရင်တာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အမှတ်မခြစ်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ဦးစားပေးဘာသာစကား Specify ။
License Agreement ကို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလက်ခံပါ။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သငျ Epson ကနေ software ကို install လုပ်ပါအကြောင်းစနစ်တကျမေးခွန်းတစ်ခုကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့အဖြေနှင့် installation ကိုပြီးပြည့်စုံသည်အထိစောင့်ပါ။
တပ်ဆင်အောင်မြင်လျှင်, သင်တစ်ဦးသတိပေးချက်ဝင်းဒိုးကိုခံရလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် device ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: Epson ထံမှ Utility ကို
ဒီ option ကကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သူကိုပိုပြီး firmware ကိုရရန်ဆန္ဒရှိနေတဲ့မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့ဖြစ်၏။ Epson ထံမှ utility Method ကို 1 ၌ရှိသကဲ့သို့, ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့တူညီဆာဗာများ အသုံးပြု. ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်ဖို့မသာနိုင်ပေမယ့်ပရင်တာ firmware ကိုအပိုဆောင်း applications များတွေ့ update ။
Epson Software Updater ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါအစီအစဉ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးက download စာမျက်နှာတွင်သွားအထက် link ကိုအသုံးပြုပါ။
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ပါဝါ Locate နဲ့ Windows သို့မဟုတ် MacOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
ကဇီပ်နှင့် run ။ လိုအပ်သောတပ်ဆင်ရန် License Agreement ကိုလက်ခံပါ။
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းစတင်သည်နှင့်လိုအပ်သောလျှင် PC ကိုမှဓာတ်ပုံပရင်တာကိုချိတ်ဆက်ရန်မျှော်လင့်ထား။
တစ်ဦးချိတ်ဆက် device ကိုအသိအမှတ်ပြုသောအစီအစဉ်၏အဆုံးမှာ start, သင်တဦးတည်းထက်ပိုရှိပါက, select လုပ်ပါ P50 စာရင်းထဲက။
scan ဖတ်ပြီးနောက်အားလုံးသင့်လျော်သော applications များတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ ပြတင်းပေါက်၏အပေါ်ဆုံးမှာအောက်ခြေမှာ, အရေးကြီး updates များကိုဖော်ပြပေး - အပို။ tick ဆော့ဖ်ဝဲသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။ ရွေးချယ်မှု, စာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ဘဲလျက် "Install ... item ကို (s)".
installation ကိုစဉ်အတွင်း, သင်တစ်ဖန်ပထမဦးဆုံးတကြိမ်အလားတူသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်လည်းပရင်တာ၏ firmware ကိုအောက်ပါဝင်းဒိုးကိုရှေးခယျြပါ။ ဒီနေရာတွင်အလုပ် P50 အခြေစိုက်ထားတဲ့အပေါ် firmware ကိုမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ဂရုတစိုက်လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ klikayte စတင်ရန် « Start ကို».
ဒီ window ၏အကြောင်းကြားစာ၏ပြီးစီးမှု installation ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ် « Finish ကို».
အလားတူပင်သူ့ဟာသူ Epson Software Updater ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ပရင်တာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ချက်ချင်းကပူးတွဲအားလုံးကို PC components များနှင့်စက်ကိရိယာများဆော့ဖ်ဝဲကို update နိုင်ကြသည်ပရိုဂရမ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ဗလာဖြစ်ပြီးအချို့သောအင်္ဂါရပ်များမှန်ကန်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသေချာစေရန်အဘယ်သူမျှမယာဉ်မောင်းရှိပါတယ်အခါ operating system ကိုပြန်လည်လာသောအခါသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူကို manually ဒရိုင်ဘာဟာသူ့ရဲ့ Configuration နဲ့ Windows ကိုဗားရှင်းအဘို့အ installed နှင့်အရာမဟုတ်သည့်အတိအကျ configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများနှင့် operating နိယာမ၏ကွဲပြားခြားနားသော program တစ်ခုစာရင်း - အခြို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်, အခြားမလိုအပ်ပါဘူး။
DriverPack Solution နှင့် DriverMax - ကျနော်တို့လူကြိုက်အများဆုံးပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကိုအကြံပြုပါသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကအောင်မြင်စွာဗားရှင်း windose ကနေစတင် embedded devices များ, ဒါပေမယ့်လည်းအရံပစ္စည်းမသာ updated နေကြသည်။ Beginners ဒီဆော့ဗ်ဝဲ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုအပေါ်ပစ္စည်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ထက်ပိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
DriverMax အသုံးပြု. Update ကိုယာဉ်မောင်း
Method ကို 4: ID ကိုပရင်တာ
အဆိုပါ OS နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်အသားမှအစဉ်အမြဲ attribute ကနောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ devaysa အကြားမှန်ကန်သောအပြန်အလှန်သည်။ ကအသုံးပြုသူများကိုလည်းယာဉ်မောင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ပြီးတော့တပ်ဆင်ရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသည်, တခါတရံတွင်သူကဟာ့ဒ်ဝဲဆော့ဖ်ဝဲရေးသူသည်ကိုယ်တိုင်ကူညီပံ့ပိုးမထားဘူးသော operating system ကို၏ဗားရှင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်။ P50 မှာအောက်ပါ၏ ID:
ဤတွင်နောက်တစ်နေ့နှင့်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးဖတ်လက်ျာကားမောင်းသူကို အသုံးပြု. ရှာဖွေမှအဘယ်သို့ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Method ကို 5: Device Manager
windose အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှလူသိများသည်, ဟုခေါ်သည့် tool ကိုလည်းမရှိ "Device Manager"။ က, သင်ကွန်ပျူတာကိုဓာတ်ပုံပရင်တာပုံမှန်ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါသောယာဉ်မောင်း၏အခြေစိုက်စခန်းဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကြောင့်ဒီနည်းလမ်းကို၏မစုံလင်မှုမှ Microsoft ကက၏လတ်တလောဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းမပေးစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်မတှေ့ဘူးသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျ add-on တစ်ခု application ကိုသငျသညျအဆင့်မြင့်ဆက်တင်မှတစ်ဆင့် device ကိုထိနျးခြုပျဖို့ခွင့်ပြုမရကြဘူး။ သို့သော်လျှင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင့်အားအရေးမပါသို့မဟုတ်သင်ရုံအောက်က link ကိုမှာဆောင်းပါးထံမှညွှန်ကြားချက်ကိုသုံးဒုက္ခသင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများဆက်သွယ်ရှိခြင်းနေကြသည်။
သင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုပရင်တာ Epson Stylus ဓာတ်ပုံ P50 ပေါ်တွင်ကားမောင်းသူရှာဖွေနေလုပ်ပြီး install ၏အဓိကနည်းလမ်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အခြေအနေအပေါ်အခြေခံပြီးအရှိဆုံးအဆင်ပြေကို select ကြောင့်သုံးပါ။